साम्राज्ञीको सल्लाहमा नाजिरले ज्यान बनाए « Ramailo छ
साम्राज्ञीको सल्लाहमा नाजिरले ज्यान बनाए
फिल्म ‘तिमी सँग’ बाट नायिका साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाह र नायक नाजिर हुसेन नजिकिएका छन् । पहिलो पटक पर्दामा एकसाथ प्रस्तुत भएका उनीहरुबिच धेरै कुरा ‘सेयर’ हुन्छन् । कस्ता कस्ता कुरा त ? यो भिडियो हेर्नुस् :
‘हामी एक अर्काको धेरै नै चासो राख्छौं’, साम्राज्ञी भन्छिन्, ‘केही भयो भने उसले (नाजिर) मलाई फोन गर्छ । मलाई केही अप्ठ्यारो भयो भने म उसलाई फोन गर्छु ।’ निकै नजिक रहेका यी दुईको कमजोरी चाहिं के हो त ?
‘ठ्याक्कै यही भन्ने त छैन । उसको सबै कुरा राम्रो नै छ । उसले आफुलाई अपडेट गराउँदै लगिरहेको छ’, नाजिर भन्छन्, ‘मैंले त्यो गर् त्यो नगर भन्न मिल्दैन ।’ साम्राज्ञी चाहिं नाजिरको अभिनयको खुलेर तारिफ गर्छिन् । ‘एक्टिङको लागि म त उसको अगाडी केही पनि होइन्’, साम्राज्ञीको सल्लाह छ, ‘अभिनय राम्रो छ । अब आफुलाई अलिक गुड लुकिङ बनाऊ भनेको थिएँ । नभन्दै उसले बनायो पनि ।’ साम्राज्ञीकै सल्लाहामा नाजिरले जिम ज्वइन गरे र ज्यान पनि बनाए ।
शिशिर राणाको निर्माण तथा निर्देशन रहेको फिल्म ‘तिमी सँग’ मा साम्राज्ञी र नाजिरसँगै नायक आकश श्रेष्ठ मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । टिम शुक्रबारदेखि मोफसल प्रचारमा निस्किएको छ । फिल्म चैत २३ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ ।